China oluzenzekelayo ezinamacala wocingo umatshini kwemveliso kunye Factory | Oomatshini baseYoute
Oluzenzekelayo ezinamacala wocingo Machine
Ezinamacala ucingo enemingxuma yi wocingo ezenziwe enqamlezileyo cut wocingo (ezinamacala) ephothiweyo iingcingo zesinyithi. Ubukhulu becala locingo olusetyenzisiweyo luyehluka ngokobungakanani becingo ezinamacala amathandathu. Iigridi ezincinci ezinamacala amancinci kunye neesinyithi zentsimbi zihlala zisebenzisa iingcingo zentsimbi enobubanzi be-0.4-2.0 mm, ngelixa iigridi ezinomaleko wePVC zihlala zisebenzisa iingcingo zetsimbi zePVC ezinobubanzi obungu-0.8-2.0 mm. Olu hlobo lomnatha onamacala asetyenziswa ngokubanzi kumnatha wokuzahlula wedwa wefama, ucingo lwamadlelo, ikheyi yezilwanyana kunye nodonga lokwakha. Le yimveliso ethembisayo.
Umatshini wocingo ozenzekelayo oveliswa ngumzi-mveliso wethu uyakuqonda ukuzenzekelayo kwemveliso enezinto ezinamacala. Olu hlobo lomatshini onamacala amathandathu lushiya uninzi lolwakhiwo loomatshini, kwaye luyatshintshwa ukusuka kukudluliselwa koomatshini ukuya kwimoto eqhuba ngokuthe ngqo kumatshini ukuba usebenze, nto leyo inciphisa kakhulu izinga lokungaphumeleli komatshini kunye nengxolo eveliswe ngumatshini. Olu luhlu lweemveliso lukwamkela umgaqo-nkqubo olungileyo kunye nolungileyo wokuluka itekhnoloji ukuvelisa ngokuthe ngqo umnatha osisinyithi onamacala afanelekileyo ukulungiselela isikhombisi. Okwangoku kukho iimodeli ezahlukeneyo, ezinje nge-1/2 intshi, 3/4 intshi, 1 intshi, 1.2 intshi, 1.5 intshi, 2 intshi, 3 intshi, njl Oomatshini abahlukeneyo kunye nezixhobo nazo zinokulungiswa ngokweemfuno zabathengi. Isinyithi ezinamacala omatshini womnatha wokunitha uneempawu zoyilo olufanelekileyo, isakhiwo esilula, ukusebenza okuzinzileyo, ukusebenza kakuhle, ukusebenza kakuhle kunye nokugcinwa okufanelekileyo. Kuthunyelwa eYurophu, eMelika, kuMazantsi mpuma eAsia, kuMbindi Mpuma, eAfrika nakwamanye amazwe nakwimimandla.
1. Umatshini womnatha we-CNC ozenzekelayo opheleleyo usebenzisa i-PLC uyilo lwekhompyuter lokuyilwa kwescreen, ukusebenza ngokukuko kunye noqwalaselo oluphezulu loomatshini, ubuchwephesha beprogram yexabiso, ukuchaneka okuphezulu, ukuqhuba kwe-servo, ukusebenza okuzinzileyo kunye nokusebenza okukhuselekileyo.
2.Ukuzenzekelayo ngokupheleleyo ukuguqula kunye nokuchaneka komatshini wocingo onamacala omatshini kufakwe ii-servo motors zokuhambisa ngaxeshanye, endaweni yokuhambisa ngokwendabuko. Ingxolo ephantsi, isantya esikhawulezayo, imveliso ezinzileyo, ukusebenza kakuhle kwemveliso, iindleko zokuvelisa eziphantsi, njl.
3. Faka kwaye usete inkqubo ye-infrared alarm, ukubala okuzenzekelayo kwekhompyuter, ukumisa ucingo ngokuzenzekelayo, ukunciphisa inkcitho yexesha lokulungisa umnatha emva kokuba ucingo olaphukileyo lophukile, kwaye luphucula kakhulu ukusebenza kwemveliso.
4. Inkqubo yokulawula inkqubo yekhompyuter ye-PLC enobukrelekrele, intambo intle, iflethi kwaye iyunifomu, kwaye inokuqiniswa embindini wawo nawuphi na umnatha wokuqinisa ukomelela.
5. Lo matshini kufakwa inkqubo ukuthambisa ajikeleze oluzenzekelayo kwaye yamkele ukuthambisa ajikeleze esembindini, nto leyo bhetyebhetye kwaye kulula ukusebenza kunye nokwandisa ubomi bomatshini.
Egqithileyo Umatshini ojikelezayo weGabion
Okulandelayo: ezinamacala umatshini wocingo
Isefu ezinamacala wocingo Machine
Ezinamacala wocingo Ukwenza Machine
Ezinamacala wocingo Welding Machine